Mamoritra ny Fahalalahana Miteny ny Fitondrana ao Vietnam, Fanagadrana Henjana ho an’ilay Mpaka Sary Mpanao Gazety sady Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2017 15:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, 繁體中文, polski, English
Voampanga ho nanao “fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana” araka ny andininy faha-88 ao amin'ny lalàna any Vietnam i Hoa 22 taona. Mifandraika tanteraka amin'ny tatitra nataony momba ny hetsi-panoherana maro nanaraka ny loza voajanahary iray izay nitarika fahafatesana trondro an-taoniny maro nanerana ny morontsiraka afovoan'i Vietnam tamin'ny volana Aprily 2016 ny fiampangana.
I Hoa no olona voalohany nampiasa drôna fakantsary manidina mba hampitana mivantana ny hetsi-panoherana eo ivelan'ny toeram-pambolena Formosa Ha Tinh Steel izay naseho ho antony mahatonga ny fiparitahan'ny poizina. Naparitaka nanerana ny haino aman-jery sosialy Ireo sarin'olona mihoatra 10000 teo ivelan'ny vavahadin'i Formosa.
Notazonina tamin'ny Janoary 2017 i Hoa, mpampiofana ara-piarovana sy mpandray anjara tsy tapaka amin'ny haino Free Asia, ary noampangaina ho “manararaotra ny zo demaokratika hanohintohina ny tombotsoan'ny fanjakana” tamin'ny voalohany. Novaina tsy nisy antony ny fiampangana azy amin'ny volana jona; araka ny voalazan'ny fianakaviany.
Nanao sonia fanambarana iray izay mitaky ny governemanta Vietnamiana mba hanafaka an'i Hoa amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety amin'ny volana Mey Ny vondrona mpandala ny zon'olombelona sy ny nomerika. Hoy ny fanambarana iombonana:
Raha nisambotra an'i Hoa ny polisy teo an-toerana tany am-piandohana, namely azy ara-batana izy ireo ary nogiazan'izy ireo ny fitaovany nandritra ny fotoana tsy namelana azy hivezivezy tamin'ny volana Novambra 2016,araka ny filazan'i Rohit Mahajan mpitondra tenin'ny haino Free Asia.
Tao anatin'ny fifanarahana amin'ny governemanta Vietnamianina, nanaiky handoa 500 tapitrisa dolara amerikana izay kianin'ny [mg] maro ho tsy misy dikany raha oharina amin'ny voka-dratsiny naterany ny Formosa. An'arivony amin'ireo mpanarato no mbola nanohy ny fanoherana ny fanonerana tsy ara-drariny na dia teo aza ireo manam-pahefana niezaka nampiato ny fihetsiketsehana.
Tamin'ny volana jona 2017 izy voaheloka 10 taona an-tranomaizina noho ny lahatsorany, didim-pitsarana nohamafisina tamin'ny 30 Novambra tamin'ny fampakarana ny fitsaràna izay naharitra ora vitsivitsy monja.
Nanohitra ilay fanapahan-kevitra tao amin'ny Facebook-ny i Vo An Don
Ireo tranga roa ireo dia ampahany amin'ny famoretan'ny fitondrana Vietnamiana amin'ny fahafahana miteny. Maherin'ny 25 ireo mpikatroka nosamborina, namoahana didy fampisamborana na lasa an-tsesitany hatramin'ny Janoary 2017. Ny didy fanagadrana navoakan'ny fitsarana tamin'ireo mpikatroka toa an-dry Hoa sy Neny Holatra no marika mampikorontan-tsaina amin'ny toeran'ny zon'olombelona ao vietnam.
19 ora izayHong Kong (Shina)